Maalinta: Diseembar 21, 2018
TCDD 4. Agaasime Goboleedka Samsun-Kalin Line Km 276 + 136 iyo Km 276 + 870'da 2 Tirada Shaqooyinka Dhismaha Wadada TC State Railways Business 4. Iibsiga Gobolka iyo Koontaroolka Suuqa [More ...]
Wasiirka Kaabayaasha Kosovo Pal Lekaj ayaa raacay shaqada wadada weyn ee Pristina-Elez Khan, oo isku xiri doonta Pristina iyo Skopje midba midka kale. Wasiirka Lekaj wuxuu leeyahay kilomitirkii ugu dambeeyay ee kiiloo mitir ee 7 kilomitir ee qaybta ugu baahida badan wadada weyn [More ...]
U guuridda Garoonka diyaaradaha ee Istanbul ayaa si tartiib ah u socon doona
Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha, Gegada Diyaaradaha Istanbul waxaa la dardargelin doonaa howlaha xNUMX gaadiidna waa la dardargelin doonaa illaa bisha Janaayo, iyada oo aan la tacaalin raaxada rakaabka ee ka imaaneysa garoonka diyaaradaha Ataturk illaa duullimaadyada garoonka diyaaradaha ee Istanbul iyo tartiib tartiib tartiib ah. [More ...]
Mashruuca URAYSIM ayaa isbedelay
National Rail xanbaarsan yahay muhiimad weyn u Turkey iyo Eskişehir Research iyo Baaritaanka Xarunta Project (URAYS I) gudahood baaxadda shaqada ayaa la dedejiyey. Dhawaan wasiir ku xigeenka teknolojiyada iyo warshadaha Hasan Büyükdede, [More ...]
Tayada qaar ka mid ah jidadka iyo jidadka ku yaal Karaman ayaa loo beddelay jid iyo boulevard iyadoo go'aankii uu gaadhay Golaha Dawladda Hoose. Iyada oo horumarka magaalada laga sameeyay, ayaa waxaa la sameeyay jidad iyo jidad qaar ka mid ah aagagga Karaman. Golaha degmada Karaman, laxiriira [More ...]
Buundada Isticmaalka 20 Deriska ee Balıkesir
Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Balıkesir Zekai Kafaoğlu wuxuu sii wadaa inuu baaraa shaqooyinka loo qabtay Dawladda Hoose ee Magaaladda. Duqa magaalada Kafaoğlu wuxuu bixiyay macluumaad ku saabsan buundada la isticmaalay isla markaana dib loo cusbooneysiiyay xaafada 20 ee miyiga degmada Ivrindi. 2018 [More ...]
Duqa Magaalada Magaalada Izmir Aziz Kocaoglu, Deniz Olgun Gunaydin barnaamijka siyaasada ee shaqo joojinta shaqaalaha Izmir ee ku aadan shaqo joojinta ururka ayaa sidoo kale qiimeeyay midowga. Isaga oo qiimaynaya shaqo joojinta "ZBAN ", Kocaoğlu wuxuu yidhi," ZZBAN [More ...]
Waxaa jirey musiibo tareen ah haddii aysan jirin nidaamyo muuqaal ah
Isku dhaca madax-ilaa-madaxa ah ee tareenka haga iyo tareenka rakaabka ee qadka Ankara-Eskişehir ayaa laga hor istaagay daqiiqadihii ugu dambeeyay iyada oo la shaqeynayo nidaamka calaamadaynta Tareenka xawaaraha sare ku shaqeynaya inta u dhaxeysa Ankara-Eskişehir 18 [More ...]
Booqashooyinka Taageerada Shaqaalaha IZBAN ee Istaraatiijiga ah sii wad
Shaqaalaha IZBAN ee shaqo joojinta ku jira, Wakiilka Gobolka DİSK Aegean Memiş Sarı iyo General - Bran İzmir 7 xubnaha Laanta iyo xubnaha Ururka Shaqaalaha Bulshada Gobolka Izmir ayaa booqday. MEMIS YELLOW: [More ...]
Warshadda Malatya Wagon Hada Bisha Cas ee Turkiga
Dhismooyinka prefabricated ee ay soo saari doonto Bisha Cas ee Turkiga ayaa hadda laga dhisi doonaa Warshadii hore ee Wagon. 20 Diseembar Sida ku xusan go’aanka lagu daabacay tirada rasmiga ah ee Gazette ee loo yaqaan 482, Warshadda Wagon waxaa la siiyay Bisha Cas oo leh qiime qaanso ah oo ah 650 kun TL. Marka loo eego [More ...]
Agaasime Ayhan: ir Waxaan rabnaa inaan abaabulno suurtogalnimada in Sivas Val
Shirka dhexdhexaadiyaha ee Sivas Workshop kaas oo la qaban doono bisha Diseembar 26 iyada oo la adeegsanayo hal-ku-dhigga 'Ortak To the the Mind Common' iyada oo berrito birlikte lala yeelanayo hay'adaha daneeyayaasha ee hoos yimaada hoggaanka Sivas Governorate oo lagu qabtay Jaamacadda Cumhuriyet. Guddoomiyaha Sivas oo isagu khudbaddii furitaanka kulanka ka hadlay [More ...]